4zọ 2020 dị mma iji meziwanye ọdịnaya gị na XNUMX | Martech Zone
4zọ 2020 dị oke mkpa iji meziwanye ọdịnaya gị na XNUMX
Mọnde, Febụwarị 24, 2020 Mọnde, Febụwarị 24, 2020 Shane Barker
2018 hụrụ banyere 80% nke ndị ahịa jiri ihe nlere anya na usoro mgbasa ozi ha. N'otu aka ahụ, ojiji nke vidiyo toro ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 57% n'etiti 2017 na 2018.
Anyị abanyela n'oge mgbe ndị ọrụ chọrọ ọdịnaya na-adọrọ adọrọ, ha na-achọ ya ngwa ngwa. Na mgbakwunye na ime nke ahụ, lee ihe kpatara ị ga-eji mee ya jiri ọdịnaya anya:
Dị mfe echeta
Na-ekpori ndụ ma na-ekere òkè
O doro anya na ịkwesịrị ịkwalite egwuregwu azụmaahịa anya gị. Iji nyere gị aka pụta, achịkọtala m usoro ole na ole ị nwere ike isi meziwanye ọdịnaya gị na 2020.
Strategy # 1: Ijikwa Ike nke Infographics
Infographics bu onyogho nwere otutu ozi bara uru. Ha na-enyere gị aka igosipụta ozi gị n'ụzọ mara mma ma na-adọrọ mmasị maka ndị na-ege gị ntị.
Ha na-eje ozi dị ka ezigbo ọnọdụ maka ịnyefe ozi n'ụdị a zoro ezo na ihe anya. A sị ka e kwuwe, ọ bụrụ na e nyere gị nhọrọ, ị ga-agụ site na okwu ederede 1000, ma ọ bụ gafere nchịkọta eserese na-egosi otu ozi ahụ?
Ọtụtụ mmadụ ga-ahọrọ nke abụọ.
Dị ka a na-adịbeghị anya nyocha, 61% nke ndị na-azụ ahịa kwuru na infographics bụ ụdị ọdịnaya kachasị dị irè maka ijigide ozi na mmụta.
Ihe ngosi na ihe osise dị egwu ejiri na infographics na-aga ogologo oge iji mee ka ndị na-agụ akwụkwọ nwee mmasị.
Yabụ, o doro anya na infographics bụ ụdị dị ike nke ọdịnaya anya.
Ma, olee otu ị ga - esi mee ka nke gị pụta ìhè n'etiti nde ndị ọzọ idei mmiri na ntanetị?
Lee ụfọdụ ndụmọdụ nwere ike inye aka:
Warara Ala na a Isiokwu
Gbaa mbọ hụ na ị gbadoro anya. Ihe omuma ihe omuma nke gunyere otutu nkọwa nwere ike ghagha onye aguru ya.
Ihe omuma gi nwere ike ime nke oma karie ma oburu n’onyeghi itinye data niile i gha enweta. Kama, wedata uche gị n’otu isiokwu ma hụ na ị mepụtara ihe omuma ahụ.
Nke a bụ ihe atụ nke akwụkwọ nkọwapụta ma dị nkenke:
Foto site na Pinterest
Nweta Nha Right
Ihe omuma ihe kwesiri ime bu ihe kariri ihe oyiyi na ihe osise. Agbanyeghị, gbaa mbọ hụ na ha dị nke nha nha na ogologo. Ọ bụrụ na echeghị nke a, ị nwere ike tufuo ndị nwere ike ịgụ.
Mepụta eserese na-enweghị ngwakọ
Chọghị iwepụta akwụkwọ ozi nke na-agabiga agabiga. Tinye oghere mgbe niile ga - enyere ndị na - agụ ya aka ịnyagharịa ihe ọmụma ahụ ọfụma.
Na mgbakwunye, gbaa mbọ hụ na ọbụlagodi mkpụrụedemede pere mpe na infographic gị dị mfe ọgụgụ.
Ozugbo imesịrị ịmepụta nnukwu infographic, ịnwere ike ịnyefe ya na weebụsaịtị dị iche iche na niche gị. Nke a nwere ike inyere gị aka iru ndị na-ege ntị karịa.
Strategy # 2: Nyefee ọdịnaya nke ahaziri iche
Ndị ahịa chọrọ ọdịnaya nke ahaziri maka ọdịmma ha. N'ezie, 91% nke ndị ahịa O yikarịrị ka ị ga-azụ ahịa site na ụdị ndị na-achọpụta ma nye ha onyinye na ahaziri ahaziri.
ọzọ Nyocha 2018 kpughere na ọ bụrụ na ọdịnaya anaghị ahaziri, 42% nke ndị na-azụ ahịa na-ewe iwe, na 29% n'ime ha ga-abụ obere ihe ịzụta.
Foto site na SlideShare
Otu ụzọ isi chọpụta ihe ndị na-ege gị ntị chọrọ bụ site na ịge ntị na mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Enwere ọtụtụ ngwaọrụ ọ nwere ike inyere gị aka ime nke a. Ha ga - enyere gị aka inyocha mmetụta ndị ọrụ gị ma chọpụta ihe ha chere gbasara gị na ndị asọmpi gị.
Ugbu a, ka anyị lelee ụzọ dị iche iche ị nwere ike isi hazie ọdịnaya gị.
Ihe Nlere na-akpata Anya-azụ
Chọpụta ihe na-abanye n'okike nke ngwaahịa na -emepụta mmetụta nke mmekọrịta chiri anya n'uche ndị na-ege gị ntị. Site na ikenye ọdịnaya a na - ahụ anya dị ka onyonyo na vidiyo na ntanetị mgbasa ozi, ị nwere ike ịnye ndị na - ege gị ntị ahịa gị.
Onye na-ese foto na Toronto, Anna, na-eme nke ahụ site na ụfọdụ ederede Instagram.
Foto site na Instagram
Na mgbakwunye, atụmatụ dị ka Akụkọ Instagram na Facebook nwekwara ike ịbụ ihe enyemaka na nke a.
Mepụta ọdịnaya mpaghara
Alizingchọpụta ọdịnaya anya anaghị akwụsị n'iji asụsụ a na-asụ na mpaghara. Iji akara aka na ntinye aka na ọdịnaya gị nwere ike inyere ndị ọrụ aka ijikọ ozugbo.
A maara usoro atụmatụ nke McDonald nke ọma n'ụwa niile. Ọ bụghị naanị na ha na-eme nke a site na igbanwe menu ha, kamakwa site na ọdịnaya anya ha.
Iji maa atụ, McDonald's na-arata ndị ahịa na US ka ha rie nri ha site na ịkekọrịta ọdịnaya nke mkpa mpaghara. N'oge na-adịbeghị anya, ha kesara ozi na National Cheeseburger Day iji dọta ndị na-ege ha ntị na US.
Ihe omuma atu ozo bu nke mkpọsa nke McDonald mere n’oge aho ohuru nke ndi China n’afọ 2016. Ebe obu na nka bu oge otutu na eme otutu ulo iji hu ezi na ulo ha, mkpọsa a lebara anya n’uru ọ di n’otu na oge ezin’ulo.
Site na vidiyo na onyonyo, o gosipụtara ụdị obere nwa bebi nke Ronald McDonald na-eme njem ogologo ụlọ.
Foto site na Rụọ Digital
Na nkenke, site na ịhazi onwe ya, ọdịnaya a na-ahụ anya nwere ike ịkpalite mmetụta siri ike, ma tinye ndị ọrụ n'ọrụ.
Strategy # 3 Gha ochi n'ime ihe omuma gi
Jectgbanye ọchị na ọdịnaya gị nwere ike inwe mmetụta dị ukwuu n'otú ndị na-ege gị ntị si etinye aka na azụmahịa gị.
Otu ụzọ kachasị mma iji mezuo nke a bụ site memes. Ha dị mkpụmkpụ, na-enye nkọwa, ma na-atọ ọchị. N'aka nke ọzọ, ịnwere ike iji gifs na-atọ ọchị na katuunu ma ọ bụ ibe na-atọ ọchị iji mee ndị na-ege gị ntị.
Ihe nkiri na-atọ ọchị nwere ike ọ bụghị naanị itinye ndị na-ege gị ntị aka kamakwa ọ nwere ike iwepụ ederede dị gị mkpa.
Usingme ọdịnaya na-atọ ọchị n'ime ihe ngosi gị anaghị enye akara gị akara mara mma, kamakwa ọ na-ebelata ọnụego ibiaghachi.
Dịka ọmụmaatụ, Royal Ontario Museum na-ejikarị memes eme ka ndị na-ege ha ntị na Instagram. Rịba ama otu ha si jiri nke kachasị ọhụrụ Ihe ịma aka Dolly Parton na akaụntụ Instagram ha.
Foto site na Tinyegram
Ọzọkwa, ọchị adịghị abụrịrị ihe ọchị. Ọ nwere ike ịbụ foto nkịta ma ọ bụ vidiyo nke ụmụ ọhụrụ - ihe ọ bụla na-eme ka ndị na-ege gị ntị ọchị.
Ma ọ bụ enwere ike, ọdịnaya gị nwere ike ịbụ AB funny ọchị ma mara mma. BarkBox, ọrụ ndenye aha maka ngwaahịa nkịta, na-eme ezigbo ihe atụ. Ọ na-egosipụta ọmarịcha foto nke nkịta ma na-agbakwụnye ọchị na ha site na ịtinye isi okwu na-atọ ọchị.
Agbanyeghị, tupu ịnabata ọchị, gosi ya ma ọ dabara n'olu na ụda olu gị. Na mgbakwunye, jide n'aka na ị naghị eji mmerụ ahụ, esemokwu, ma ọ bụ ọchị na-ekwesịghị ekwesị. Nke ahụ nwere ike ịba uru maka ụdị ika gị.
Strategy # 4: Dezie Ngwaọrụ Ọdịnaya Anya
Mgbanwe agbanwe agbanwe na usoro ndị ọrụ nwere ike ime ka o sie ike ịme usoro atụmatụ ọdịnaya gị. Ọ bụ ya mere ị ga-eji tụlee iji ya ngwaọrụ nke ahụ nwere ike inyere gị aka ịmepụta ihe ngosi ọhụụ ma mee ka ha nwekwuo ike na mgbasa ozi mmekọrịta.
Jiri ngwa oru dika Canva, Animaker, Google Charts, iMeme na ndi ozo iji bia ihe ngosi di egwu.
Ọ bụrụ na iji ikike nke ọdịnaya anya n'ụzọ ziri ezi, ọ nwere ike inyere gị aka ịmepụta oke aka. Should kwesịrị ịtụle ịhazi ọdịnaya ihe ọhụụ gị ka ọ dịrị ndị na-ege gị ntị mkpa.
Na ntinye, ikwesiri itinye ihe omuma ihe n'ime ihe omimi gi, ma oburu na i mebeghi ya. Ọ na - enye aka inye ụfọdụ ọchị iji mee ka ọdịnaya ahụ nwee mmekọrịta.
N'ikpeazụ, jiri ihe ndị e kere eke na-ahụ anya iji bulie egwuregwu gị ma mee ọtụtụ ihe na-ahụ anya.
Enwere atụmatụ ndị ọzọ ị na-eji emeziwanye ọdịnaya gị na-ahụ anya? Ka anyị mara na ihe.
Tags: adobe ọdịnaya ọnụ ọgụgụotúmeziwanye mmekọrịta mmadụ na ibe yametụtara ọdịnayaInfographics Ahịamemesọdịnaya ọdịnayaọnụ ọgụgụ nchịkọta ọdịnaya